Isboortiga iyo Kaalintiisa Horumarinta Dalka Soomaaliya. (2) Login
Current Articles Archives Search Isboortiga iyo Kaalintiisa Horumarinta Dalka Soomaaliya. (2)
Written by Kubadda at 9:21 PM on Wednesday, August 21, 2013 Tweet
Waa maxay 'Isborti'? Hadii aan micneyno Isboortiga & Horumarinta, Isboorti waxaa markan micnihiisu noqonayaa firfircooni jireed oo dhaafsiisan tartan ama kulan Isboort. waxaa raacsan firfircoonida jireed , fiyoobi maskaxeed, fal gal (Is dhex gal) bulsho. Waxaa raacsan Isboortiga caalamiga ah ciyaaraha dhaqan ama u gaar ah dal ama degaan. Marka Isboortiga ujeedadiisu tahay dhaqan toosin waxaa muhiimadu noqonaysaa tirada ka qayb galayaasha ee ma aha guushu dhankey raacday. Waxaa muhimadu tahay saamaynta ay ku yeelatay (impact) ee ma aha tayada farsamo. Waxaa sidoo kale asaas u ah sida loogu ababiyo ubadka yaryar ee dugsiyada hoose, dhexe, Sare, ilaa Jaamicada ka qayb qaadashada firfircoonida jireed (physical Education). Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa dhaqan celinta dembiilayaasha xabsiyada ku jira. Waxaa la ogaaday in laba maxbuus oo isku mid ah hadii midna uu helo laylin jireed midna qolkiisa ku jiro in farqi badani u dhexeynayo marka la soo daayo. Qodobka ugu weyn waa kalsoonida ku jirta qofka jimicsan jirey oo dad la sheekeysan jirey iyo saska ama kalsooni xumada ku jirta kan aan qolkiisa ka soo bixin. Intaas iyo in kale oo fara badan awgood waxaa Jamciyadda Qaarumaha (United Nations) si joogta ah u taageertaa dalalka loo arko iney u baahanyihiin in loo adeegsado Isboortiga aalad lagu dhiiri geliyo Waxbarashadda, Caafimaadka, Horumarka iyo Nabadaynta. Waxaa dal kastii u baahanyahay inuu ku salayo qorshihiisa baahidiisa iyo duruuftiisa gaar, waxaa sidoo kale loo baahanyahay in lagu koobo qader la qaban karo, loona kala hormariyo muhimadu ama baahidu sidey tahay. Horumarinta Isboortiga Soomaaliya wuxuu ku salaysnaa ardayda dhigta dugsiyada Waxbarashadda oo aan qaabkoodu ahayn habkii lahaa maamul midaysan oo dowli ah iyo manhaj midaysan. Intii taqaana ayaa taqaane boqolkiiba sagaashan ama ka badan kaadirka ama hawl karka Isboortiga Soomaaliyeed wuxuu ka yimi wasaaradda waxbarashadda iyo Barbaarinta. Hadii la raacayo habkii hore u jirey ee la yaqaan welina ay noolyihiin dadkii wax ka fuliyey barnaamijyadaas waxaa ugu horayn loo baahanyahay:
Horumar waxaa la oran karaa waa marka tirada iyo tayaduba ka soo rayn macquul ah samaynayaan. Ma aha maanta maalintii la qiimayn lahaa dhalinyarada maanta , dharaartaas weli lama gaarin waxaa maanta la joogaa xilligii la qiimayn lahaa waayeelka, intii xil soo qabatay. Ilaa iyo qormada tan xigta Wadeeca Alle.
W.Q. Hassan Farah (Macalin John) (Qoraalkan marna looguma jeedo shakhsi ama koox gaar waana qoraal cid kasta la soo dhoweynayo fikradeeda ama aragtideeda. Mahadsanidiin)
18352 Views :: 561 Comments :: :: Sports News